Wholesale Macroporous Adsorptive Resins Mugadziri uye Mutengesi | Dongli
Dongli's adsorbent resins akagadzirwa echitenderedzwa marozari ane yakatsanangurwa pore dhizaini, polymer chemistry uye yakakwirira nzvimbo nzvimbo inoshandiswa pakuchenesa uye kusarudzika kudhonzwa kweanotungamira mamorekuru mune aqueous mhinduro.
Resins Chimiro chePolymer Matrix Chitarisiko Fomu Kuonekwa Pamusoro nNzvimbo m2/ g Avhareji Pore Dhayamita Kushambadzira Kugona Mhepo Yemukati Particle Saizi mm Kutumira Kurema g / L
AB-8 Macroporous Ploy-styrene ine DVB Opaque Yakachena Spherical Mabheji 450-550 103 nm 60-70% 0.3-1.2 650-700
D101 Macroporous Poly-Styrene ine DVB Opaque Yakachena Spherical Mabheji 600-700 10 nm 53-63% 0.3-1.2 670-690
D152 Macroporous Pype Poly-acrylic ine DVB Opaque Yakachena Spherical Mabheji Na / H 1.4 meq.ml 60-70% 0.3-1.2 680-700
H103 Tumira Crosslink styrene ine DVB Yakasviba brown kune nhema Spherical 1000-1100 0.5-1.0TOC / g100mg / Rine mamiririta 50-60% 0.3-1.2 670-690
Macroporous adsorption resin rudzi rwe polymer adsorption resin isina boka rekuchinjana uye macroporous chimiro. Iyo ine yakanaka macroporous network dhizaini uye yakakura yakatarwa nzvimbo nzvimbo. Iyo inogona kusarudza inoshambadzira yakasikwa nyaya mune aqueous mhinduro kuburikidza nemuviri kushambadzira. Iyo mhando nyowani ye organic polymer adsorbent yakagadzirwa muma1960. Yakave ichishandiswa zvakanyanya mukuchengetedza kwezvakatipoteredza, chikafu, mishonga uye mimwe minda.
Macroporous adsorption resin inowanzo chena idenderedzwa idzo ine chidimbu saizi yemakumi maviri-60 mesh. Iwo macrospheres e macroporous adsorption resin anoumbwa neakawanda madiki madiki ane maburi mune imwe neimwe.
Macroporous adsorption resin yakaiswa polymerized ne styrene, divinylbenzene, nezvimwe mu 0.5% gelatin solution uye imwe chikamu cheporogen. Styrene yaishandiswa senge monomer, divinylbenzene seyero yekumonera, toluene uye xylene semaporogen. Iwo akange akatanhamara uye akaiswa polymer kuti vagadzire iyo porous system chimiro che macroporous adsorption resin.
Iko kusarudzwa kwe adsorption uye desorption mamiriro anokanganisa zvakananga mhando yeiyo adsorption maitiro e macroporous adsorption resin, saka zvinhu zvakasiyana siyana zvinofanirwa kutariswa muchirongwa chose kuona yakanakisa adsorption uye desorption mamiriro. Pane zvinhu zvakawanda zvinokanganisa resin adsorption, senge zvivakwa zvezvikamu zvakaparadzaniswa (polarity uye saizi yemorekuru), zvivakwa zvekutakura solvent (solubility yesolvent kune zvinoriumba, munyu wevasungwa uye pH kukosha), iko kukonzeresa kurodha mhinduro uye adsorption kuyerera kwemvura. chiyero.
Kazhinji, mamorekuru akakura epolar anogona kupatsanurwa pane yepakati polar resin, uye mamorekuru madiki epolar anogona kupatsanurwa pane isina-polar resin; Iyo yakakura vhoriyamu yekomboni, inowedzera kukura kwepore resini; Iyo adsorption inokwana resin inogona kuwedzerwa nekuwedzera yakaenzana huwandu hwesiniki munyu mune yekugadzirisa mhinduro; Acidic macomputer ari nyore kuve adsorbed mune acidic solution, zvigadzirwa zvekutanga zviri nyore kushambadzwa mune alkaline mhinduro, uye zvematongerwo enyika macomputer zviri nyore kupepetwa mune kwazvakarerekera mhinduro; Kazhinji, iyo yakaderera kudzikiswa kwekutakura mhinduro, zvirinani kushambadzira; Kune sarudzo yekudonhedza mwero, zvirinani kuve nechokwadi chekuti resini inogona kusangana zvizere nemhinduro yekurodha yekushambadzira. Izvo zvinhu zvinokanganisa iyo desorption mamiriro zvinosanganisira mhando ye eluent, concentration, pH kukosha, kuyerera mwero, nezvimwe. Iyo eluent inogona kuve methanol, ethanol, acetone, ethyl acetate, nezvimwewo. Kukwanisa kwezvinhu zvakasiyana pairi; Nekushandura iyo pH kukosha kweiyo eluent, iyo mamorekuru fomu ye adsorbent inogona kuchinjwa, uye zviri nyore kukwirisa; Iyo elution kuyerera chiyero inowanzo kudzorwa pa0-5-5ml / min.
Kukura kwepore uye yakatarwa nzvimbo yemacroporous adsorption resin yakati kurei. Iyo ine matatu-mativi matatu-ehupamhi pore chimiro mukati meiyo resin, iyo ine mikana yakawanda senge yakakwira kugwinya uye kwemakemikari kugadzikana, yakakura yakatarwa nzvimbo nzvimbo, yakakura adsorption kugona, kusarudzika kwakanaka, kumhanya kushambadzira kumhanya, kwakapfava desorption mamiriro, nyore kumutsiridzwa, kureba sevhisi yekutenderera, inokodzera yakavharwa redunhu kutenderera uye kuponesa mutengo.
Pashure: Inert uye Polymer mabheji
Zvadaro: MA-202U (Macroporous Yakasimba-Base Anion Shanduro Resin)